Amanye amabali aqaqambileyo kaJorge Luis Borges (III) | Uncwadi lwangoku
M. Ukhwekhwe | | Amabali
Inxalenye yesithathu yokuphononongwa kwamabali ombhali waseArgentina JU-Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo. Ukufunda icandelo lesibini cofa apha. Ezi ndibonisa namhlanje zivela kwincwadi yakhe Iintsomi (1944), ngakumbi amabali amafutshane amathathu avela kwinxalenye yesibini, Ubugcisa, endiyifumene inomdla ngakumbi ngenxa yezizathu ezithile.
1 Ubume bekrele
2 Umngcatshi kunye nomxholo weqhawe
3 Ukufa kunye nekhampasi
Izizathu zokuba umntu axabise omnye okanye ukumthanda azipheli.
Umhlobo wam osengqiqweni wayendithengisa ngokufanelekileyo.
Abakhweli bamahashe abathe cwaka ababejikeleza iindlela; kwabakho uthuthu nomsi emoyeni; ekoneni ndabona isidumbu silele, singanyamezeleki kwimemori yam kunesixhobo sokulwa apho amajoni ayesebenzisa khona uphawu lokumakisha, embindini wesikwere ...
Siqala nge Ubume bekreleIbali apho umntu waseIreland ohlala eTacuarembó, eUruguay, uxelela uBorges ngokwakhe, wajika waba ngumlinganiswa, isikhumba esibi owela ubuso bakhe. Olu fakelo lwe umbalisi emsebenzini wakhe Ndingazimela ndedwa, kodwa njengesiqhelo kwilizwe laseBorgia, ndingathanda ukugxininisa ukuba umbhali udlala ngeziqhelo zokubhala. Kwakhona, uBorges usenza sithandabuze ngokulungileyo, okubi, Ngubani oligorha kwaye ngubani umntu okhohlakeleyo?.
Umngcatshi kunye nomxholo weqhawe
Cinga ngokufuduka kwemiphefumlo, imfundiso eyoyikisa oonobumba beCeltic nokuba noKesare ngokwakhe wabizwa ngokuba yiBritish Druids; Cinga ukuba ngaphambi kokuba abe nguFergus Kilpatrick, uFergus Kilpatrick wayenguJulius Caesar. Usindisiwe kwezi labyrinths ziisetyhula ngesiqinisekiso sokufuna ukwazi, isiqinisekiso esiza kuthi kamva simngenise kwezinye iilebhu ezingaphaya kokuxakeka nezinobunzima: amagama athile omceli owayencokola noFergus Kilpatrick ngomhla wokufa kwakhe, aboniswa nguShakespeare, kwi Intlungu kaMacbeth. Leyo mbali yayikope imbali yayimangalisa ngokwaneleyo; ukuba imbali ikhuphela uncwadi ayicingeki ...
Njengoko isihloko sebali lethu lesibini sihamba kakuhle, kwifayile ye- Umngcatshi kunye nomxholo weqhawe U-Borges uphinde angene kwimicimbi esele iphakanyisiwe emsebenzini wakhe wangaphambili. Kwaye kwakhona, nge Ireland imvelaphi. Kodwa ngeli xesha indlela yahlukile: umbhali waseArgentina usenza sicingisise nge ii-symmetry ezoyikisayo, kwaye Iziganeko ezingaqhelekanga ezinokuthi zibonwe kwimilambo yeMbali. Ngokukodwa, iyasikhulisa ukuba uncwadi, intsomi kwaye, ekugqibeleni, ubuxoki bunokukhuthaza inyaniso, lihlabathi elibonakalayo esihlala kulo.
Ukufa kunye nekhampasi
U-Lönnrot wayezikholelwa ukuba ungumntu oqiqayo, u-Auguste Dupin, kodwa kukho into eyamenza waba lilungu kuye nokuba ungcakaza. […]
"Akunyanzelekanga ukuba ujonge iinyawo ezintathu ngekati," watsho uTreviranus, ebhengeza i-cigar engathandekiyo. Sonke siyazi ukuba iTetrarch yaseGalili ineesafire ezilungileyo kakhulu kwihlabathi. Umntu othile, ukuba, uya kungena ngempazamo apha. U-Yarmolinsky uvukile; isela kuye kwafuneka liyibulale. Ucinga ntoni?
"Inokwenzeka, kodwa ayinamdla," uphendule watsho uLönnrot. Uya kuphendula ukuba inyani ayinaso nesibophelelo sokuba nomdla. Ndiza kuphendula ukuba inyani inokuhambisa olu xanduva, kodwa hayi ii-hypotheses. Kule uyiphuculeyo, ithuba lingenelela kakhulu. Nantsi irabi efileyo; Ndingathanda inkcazo yoorabhi, hayi iimpazamo ezenziwayo zesela lokucinga.
Siphetha uphononongo lwethu lwanamhlanje nge Ukufa kunye nekhampasi, ibali eliqhubeka nesiko le amabali ayimfihlakalo kunye nabecuphi. Oku akumele kusimangalise, kuba asiyomfihlo ukuba uBorges, njengomfundi onomdla, wayesazi kwaye emthanda Edgar Allan Poe. Ngapha koko, umcuphi wakho oyintsomi, UAuguste Dupin, kukhankanyiwe kwibali laseBorgian.
Ibali likwaveza enye ye-Argentina: Inkolo yamaJuda kunye nemfihlakalo, njengomqolo ongasemva wokubulala ophambili, ILönnrot, Kuya kufuneka usombulule. Nangona kunjalo, into enomdla ngeli bali yile dlala nomfundi y utshabalalisa iindibano kunye nemifanekiso kuthathwa ngokwemvelo kolu hlobo loncwadi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Amabali » Amabali abalaseleyo kaJorge Luis Borges (III)